Shariif Xasan “Dad ayaa raba inay dhimbil dab ku ciyaaraan,” – Hornafrik Media Network
Shariif Xasan “Dad ayaa raba inay dhimbil dab ku ciyaaraan,”
By HornAfrik	 On Oct 13, 2017
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay xaalada ku xuntahay ayaa sheegay in dhibaatada dalka ka jirta looga bixi karo Federaalka oo la xoojiyo, isagoo u digay dad raba inay dhimbil dab ku ciyaaraan.
Shariif Xasan oo wariyeyaasha kula hadlayay shalay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in shirkii Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul, lana isku afgartay in laga wada shaqeeyo siyaasada, amniga iyo xoojinta Federaalka.
“Shirka Kismaayo waxaa u aragnaa inuu ahaa mid masiirka umadda Soomaaliyeed ka turjumaya, dhibaatooyinka hada jira iftiinkii looga bixi lahaa”ayuu yiri Shariif Xasan.
Waxaa uu sheegay in dowladda Dhexe ay hada orod ku socoto, balse waxaa uu tusaale u soo qaatay geedkii orod lagu koro, in orod looga soo dagayo.
Shariif Xasan ayaa sheegay in wada tashi wax walba lagu dhameyn karo, isla markaana Soomaali ay horumar ku gaari karto Federaalka oo la hirgeliyo, sharciyadiisana lagu dhaqmo.
“Soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa ka jira, waxaa looga bixi kara waa in Federaalka la xoojiyo, siyaasad degan lagu wada shaqeeyo, laakiin waxaa aragnaa dad badan oo raba inay ku dheel dheelaan dhimbil dab, qofkii dhimbi damba gacanta ku qabtana ma heyn karo asigaa deynaya, in la iska dhaafo siyaasad degan amni iyo is bedel laga shaqeeyo”ayuu yiri.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa sheegay in markii ay imaanayeen aysan jirin waxyaabo ay ka dhaxleen maamulkaan, isla markaana meel cidlo ah ugu yimaadaan, isagoo xusay in waqtiga u dhiman ay dhameysan doonaan, isla markaana cidii bedesha ay wax dhaxli doonaan sida uu yiri.
Shariif Xasan ayaa xilligan ku furan mowjado siyaasadeed, iyadoo uu wajahayo kacdoon uga imaanaya siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa, kuwaasoo dhowaan shir ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inay mooshin ka keenayaan.
Somalia’s Defense Minister, Army Chief Resign.
Wadahadalo U Bilaawday Madaxda Iskhilaafsan Ee Maamulka Galmudug